Waxaynu ogayn dhacdadii ama falkii lagula kacay Wargayska Hubaal cidii gaysatay iyo siddii uu u qiray taliyuhu inay labada nin ee falkaa gaystay ka tirsanaayeen ciidanka bilayska, maxaynu sugaynay? « Laaleysnews.com
Hadaba intaasoo dhami iyadoo dhacday miyaa lasoo qabatay ninkii kale si labadaba marqudha maxkamad loo geeyoo? Qabasho lasoo qabto kii maqnaa daaye waxaaba ooda laga qaaday kii la hayay ee ay qabteen hawlwadeenada wargaysku iyagoo ku sababeeyay waxaa iman waayay ama dabagal ku samayn waayay dhibanihii falkaa lagula kacay. Ma dhibanahay ahayd inuu kiiska daba galo mise cid kalaa shaqadaa lahayd ? cida shaqadaa lahayd , cida amarka xayiraada fulinaysay iyo cida afka soo duubatay maxay kala yihiin? Su aalahaa jawaabtooda waxaan udaynayaa dadwayanaha iyo cidkasta oo sharciga wax ka garanaysa.
Waxaa xigay intaa inay dhibanayaashii mudaharaad ku muujiyaan xuquuddooda kaga maqan cidii amaanka ilaalinaysay taasoo ahayd in wax laga qabto falkaa isku dayga dilka ahaa ee lagula kacay wargayska Hubaal iyagoo umarayay habka uu udhigay dastuurku in ay marto cidkasta oo doonaysa inay xuquuqdooda ka maqan ku muujiyaan hab mudaharaad salmi ah. Waxay ka suurta gali wayday isla markaana hor istaagay cidii amaan ka dalka qaabilsanayd isla markaana xuquuqda dhibanayaasha kamaqnayd cidii ay kaga maqnayd ahayd .
Hadaba iyadoo xaalku halkaa marayo ayaan ku warhelay in ciidan hubaysan oo katirasan ciidanka bilayska qabsadeen xaruntii Wargayska Hubaal iyaagoo yidhi waxaanu sidana warqad xayiraadeed doonayayna inay qabtaan maamulka wargayska maamulka wargayska oo ah dhibanayaashii lagu soo weeraray xaruntooda kuwaas oo sugayay cid u raadisa xuquuqdaa ka maqan, hadaba goormay xayiraadi timaadaa ama warqad xayiraadeed maxkamadi qortaa iyadoo aanay kiisba furmin oon la qaadin xukuna dhicin? Miyaanay noqonayn sharcigana anagaa hayna fulintuna waa anaga ? sidaynu ognahayna dalku wuxuu ku dhisan yahay sharci shircigaas oo ay waajib tahay in ay ku dhaqmaan dhamaan cidkasta oo ku nool dalkan ha ugu horeeyo cida sharciga ku fadhida ee awooda qudha ee uu shicibka dheer yahay ay tahay sharcigaa saa maxayna inuu noqdo adeege u adeega umada reer Somaliland oo dhan, hadaba hadii uu sharciga ilaalin waayo cida qudha ee awoodiisu sharciga ahayd yaa ilaalinaya sharciga ama ku dhaqmaya ? ma waxaa ilaalinaya dadwaynaha ama shicib waynaha arkaya sida ay xukuumadu ubaalmarayso sharciyada dalka uyaala.
Markaynu dib ugu noqono xukuumada Kulmiye ee dalka ka talisaa waqtigay mucaaridka ahayd. Waxay ugu necebayd in lagu yidhaa sharciga ha la ilaaliyo, hadaba markaad eegto arintaa iyo xukuumadan kulmiye habka ay sharcigii ugalayso miyaynaan odhan karayn sharcigay tartamayeen oo cida kaliya ee ay is hayeen ama ay iska soo horjeedeen waxay ahayd sharciga , waxaanan qoraalkayga ku soo gunaanadayaa sharciga ha la ilaaliyo.
by craxmaan badel cumar
WAR DEG DEGA: TACSI NAXDIN BADAN WAXAA GEERYOOTAY SULDAANKA GUUD EE SUBEER AWAL XASKIISA ALLE HOW NAXARIISTEE
GUDOOMIYAHA MAXKAMADAHA CIIDAMADA SOMALILAND OO WARGEYSKA HUBAAL KU EEDEEYEY INAY KA CAGO JIIDEEN INAY HOR KENAAN CADEYMO’’ warkaas oo faahfaahsan halkan dhageyso guji